Nnwom 121 NA-TWI - Awurade, yɛn hwɛfo - Mɛma m’ani so - Bible Gateway
Nnwom 120Nnwom 122
Nnwom 121 Nkwa Asem (NA-TWI)
121 Mɛma m’ani so makyerɛ mmepɔw no, ɛhe na me mmoa fi bɛba? 2 Me mmoa fi Awurade, ɔsoro ne asase yɛfo no. 3 Ɔremma wo nan nwatiri. Nea ɔhwɛ wo no, rentɔ nko. 4 Nea ɔhwɛ Israel no, rentɔ nko na ɔrenna.